‘सोच्दा असम्भव लाग्छ तर, मैले गरेँ’: अयोग्य लडाकु, योग्य धाविका – मिरा राई « Khasokhas Follow @khasokhasmag
(हामीले मार्च महिनालाई शशक्तिकरण महिनाको रुपमा मनाइरहेका छौं । र तपाईहरुलाई मार्च महिनाभर शक्तिकरणका कथाहरु सुनाउदै जानेछौं । यो सामाग्री अन्तिम पटक मार्च ६, २०२१ मा अपडेट गरिएको छ । – सम्पादक)
सपना र विपनाबीच कति अन्तराल हुन्छ म भन्न सक्दिनँ । तर, अहिले म जहाँ छु, कुनै सपनाभन्दा कम छैन । जंगलको एउटा कुनाबाट आएर अहिले सबैमाझ चिनिएको मात्र छैन, देशको परिचयमा जोडिएकी छु । एउटा मान्छेको जीवनमा यस्तो पनि सम्भव हुँदोरहेछ, आफैं दंग पर्छु ।
म भोजपुरको दुम्मा गाउँमा जन्मिएकी । मेरो घर भएको ठाउँलाई घोर्लेवन भन्छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म विजुली पुगेको छैन ।आमा बुबालाई नभनि जनयुद्धमा गएकी थिएँ । केही समयको तालिम लिन्छु भन्ने सोच थियो तर गएपछि गएको गयै भइयो । आमाले धेरै सम्झिरहनु भएको होला लागेर नौ महिनापछि चिठी लेखेर त्यसमा सानो पासपोर्ट साइजको फोटो टालेर घरमा पठाएँ । मरी कि ज्यूँदैछे भन्ने उहाँको चिन्ता त्यो चिठी भेटेपछि मेटियो होला ।
७ कक्षासम्म त जसोतसो विद्यालय गइरहेकी थिएँ । स्कूल जाँदा पनि कुद्दै गइन्थ्यो । बिहान पानी बोक्न, घाँस काट्न जानुपथ्र्यो । घास काटेर आएपछि भारी बिसाएर हतार हतार भात खाएर किताब च्यापेर स्कूल कुद्थ्यौँ ।साथीहरु स्कूल जानको लागि बिहान ७ बजे नै हिँड्थे । म भने ९ बजे हिँड्दा पनि उनीहरुभन्दा पहिला पुग्थेँ । दिउँसो पनि ४ बजेपछि स्कूलबाट अरु निस्कन नभ्याउँदै कुदी हाल्थेँ । घर पुगेर खाजा छ भने खाइन्थ्यो, छैन रहेछ भने यत्तिकै जंगलमा घासको भारी हाल्न हिँडिहालिन्थ्यो ।
त्यो बेला ७ कक्षा पास गरेर ८ मा पुगेकी मात्र थिएँ । भर्खर १५ वर्षको हुँदो हुँ । त्यो समयमा जे जसरी लागेको भए पनि अहिले मेरो लागि त्यो एउटा अवसर नै थियो जस्तो लाग्छ ।शान्ति सम्झौतापछि शिविरमा बस्न पुग्यौं लामो समय । त्यहाँ बस्दा नै खेलकुदको बारेमा बुझेकी थिएँ । करातेदेखि अन्य विभिन्न खेलको प्रशिक्षण पनि लिन पाएँ । तर त्यसमा अवसरहरु भने पाइएन । किनकी समायोजनका बेला उमेर नपुगेका कारण अयोग्य बनेर निस्किनु पर्‍यो । त्यत्रो मेहनत गरेका थियौँ, कडा मेहनत गरेका थियौँ तर, त्यो सबै वेवास्ता गरियो । तर ठिकै छ … ।
त्यो समय मनमा साहस थियो । परेको व्यहोर्ने भनेर अरु साथीहरु पनि त हुनुहुन्थ्यो नि । किनकि मलाई अरु केही वास्ता नै हुँदैन थियो । गोठालो, खेतालोबाहेक भिन्न कुरा गर्न चाहन्थेँ त्यसैले साहस आयो । तर आमाबुबालाई धेरै दुःख दिएछु भन्ने बुझेर पछि भने दुःख लाग्यो ।बिहानदेखि बेलुकासम्म केही न केही तालिम भइरहेको हुन्थ्यो । पछि सिन्धुलीको बेल्चोकमा शिविरमा बस्ने बेला पनि सबै काम हामी आफैले गरेका थियौँ । चुरेबाट बाँस बोकेर ल्याएर आफैले घर बनाएका थियौं ।
पूर्वपश्चिम सबैतिरको साथीहरुको भोगाइ पनि मेरो जस्तो नै थियो । दुःख आफ्नो ठाउँमा छ, पकाउने, खाने, अभ्यास गर्ने सबै कुरा अहिले सम्झँदा छुट्टै सिकाइ थियो जस्तो लाग्छ । त्यो त एउटा इतिहास हो मेटेर पनि त मेटिँदैन ।अहिले पनि ती दिनहरु याद आइरहन्छन् । कहिलेकाहीँ त सपनामा पनि देखिन्छ । त्यो संघर्ष, त्यहाँका साथीहरु बिर्सन्छु भनेर पनि सकिने कुरा होइन ।
अहिले सम्झँदा पनि कुरै गर्न मन हुँदैन । त्यसरी मेहनत गरेको वेवास्ता गर्न सक्नु खै के भनौँ । सेना समायोजनमा ४ हजार ८ जना साथीहरुसँगै बाहिरिनुपर्‍यो । सम्झँदा पनि साह्रै दुःख लाग्छ । त्यो समयमा गाडी भाडा जसरीे १५ हजार रुपैयाँ दिएर ल जाउ घर भन्नु असाध्यै दुःखद अवस्था थियो ।उनीहरुले भनेजस्तो हामी कोही पनि अयोग्य त थिएनौं । त्यो तरिका असाध्यै नराम्रो लागेको थियो । अयोग्य भनेर निस्किएपछि पनि पाँच वर्षसम्म मैले घरमा भन्नै सकिनँ । क्याम्पमै छु भन्दै सिन्धुलीमा बसेर पढाइलाई अगाडि बढाएँ । दशैंमा मात्रै घर जान्थेँ ।
साथीहरुको जे सपना थियो त्यो पूरा भएको छैन । बेरोजगार हुनुभएको छ । अहिले त ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भन्ने हाम्रो पुरानो उखानको याद आउँछ ।साथीहरुसँग अहिले पनि कुराकानी भइराख्छ । ‘हामीले नसके पनि तिमीले राम्रो गर्‍यौँ’ भन्छन् । ‘पहिले नाकबाट सिँगान चुहाउँदै बन्दुक समाउन्थ्यौ, अहिले विश्व जित्यौँ,’ भन्छन् । त्यसले मलाई खुशी लाग्छ ।
आर्मीमा जानुभएका कोही कोही साथीहरुसँग पनि भेट हुन्छ । केही समयअघि क्याम्पमा गएको पनि थिएँ । लाइन मिलेर भात खाएका दिनहरु सम्झिएँ ।यो सबै कुरा किन भनिरहेको भने, यदि म माओवादीमा नगएको भए अहिले मैले ट्रेल रनिङमा जे जस्तो उपलब्धी पाएको छु त्यो केही पनि हुँदैनथ्यो । अहिले देश विदेशका भीर पाखामा दौडन सक्ने क्षमता र सम्भावना त्यहाँबाट नै विकास हुँदै गएको हो ।
कराते गुरु ध्रुब बिक्रम मल्ल हामी क्याम्पमा हुँदा नै खेलाडी छनोटको लागि आउनुभएको थियो । त्यहाँ उहाँसँग चिनजान भएको थियो । म विदेश जान काठमाडौं आएको थाहा पाएपछि उहाँले नै विदेश नजान र खेलकुदमा नै लाग्न प्रोत्साहन गर्नुभयो ।भोजपुरबाट आएर काठमाडौंमा बस्ने मेरो क्षमता नै थिएन । हाम्रो त पैसा आउने स्रोत नै पो के थियो र ? कताततै पैसा जाने स्रोत मात्रै । त्यसैले गुरुले नै यहाँ बस्ने, खेलकुदमा लाग्ने अवसर दिनुभयो ।
पहिलो प्रतियोगिता जितेर आएको ७ हजारले केही समय त पुग्ने भयो भनेर धेरै खुशी भएँ । त्यसपछि ४५ सय आयो ।अझै केही गर्छु भनेर कुदिरहेको त दुई वर्षमा नै विश्व नम्बर दुई भएछु, मलाई नै थाहा थिएन । अहिले त आश्चर्यजनक लाग्छ ।
त्यहाँ सहभागी हुने एकजना धावकले नै मलाई इटालीमा गएर प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर मिलाइदिनुभयो । उहाँकै घरमा बस्ने खाने र प्रशिक्षणको वातावरण मिलादिइनुभएको थियो ।त्यतिखेर मेरो पासपोर्ट पहिले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जानका लागि दिएको म्यानपावरमा नै थियो । ध्रुब गुरुले नै १२ हजार कि कति पैसा दिएर पासपोर्ट झिकिदिनु भएको थियो ।
२०१४ मा ट्रेल रनिङ सुरु गरेको २०१५ मा विश्वकै दोस्रो स्थानमा पुगेँ । इटाली, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रेलिया, स्पेन, नर्वे, बेलायत हुँदै विभिन्न देशमा प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएँ । २०१४ मा मात्रै नौ वटा प्रतियोगिता भएछ । त्यसमा ७ वटामा त पहिलो नै भएँ । दुई वटामा दोस्रो भएँ ।
२०१५ मा ११ वटा प्रतियोगिता खेलेँ । त्यसमा ६ वटामा पहिलो भएँ । एउटामा दोस्रो र एउटामा तेस्रो भएँ । एउटामा चौथो भएँ । २०१६ मा दुईवटा प्रतियोगिता खेलेँ । एउटा बेलायतमा र एउटा स्पेनमा थियो । बेलायतको थ्री पिक्स रेसमा दोस्रो भएँ । स्पेनमा भने आठौँ भएँ । त्यो बेला मलाई चोटले सताउन थालिसकेको थियो । चोटकै बाबजुद पनि २०१७ मा बेलायतमा नै बेन नेभिस अल्ट्रा दौडमा १२० किलोमिटर कुद्दा पहिलो भएँ ।
२०१६ मा लिगामेन्टको इन्जुरी देखिएको थियो । त्यतिबेला बेलायतमा थ्री पिक्स रेसमा ४२ मिलोमिटर दौडिरहँदा खुट्टा खोँचियो । पहिले नै नशा चुडिएको रहेछ । थाहा नै भएन ।दुई वर्षअघिको त्यो रेस सकाएपछि इटालीमा लिगामेन्टको सर्जरी गरेँ । त्यसले पनि पूरा ठीक भएन । अहिले फेरि दोस्रोपटक फ्रान्समा सर्जरी गरेको छु । अब विस्तारै राम्रो हुँदै गएको छ ।
लक्ष्य नै बनाएर लागिरहेकी छु आश गरौं, राम्रो हुँदै जानेछ ।मानिसको जीवनमा समस्या त आउँछ नै, त्यसलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्छ । त्यो गाउँबाट काठमाडौं आउने सपना देख्न नसक्ने मैले २०१७ मा नेशनल जोग्राफीले विश्वभरका साहसी व्यक्ति छानेर दिइने ‘एड्भेन्चर अफ दि इयर’ को अवार्डसम्म लिन पाएँ । त्यसको एउटै कारण हार नमानिकन गरेको मेहनत नै हो ।
अहिले घाइते भएर बस्नुपरेकाले न उँभो जानु त उँधो जानु जस्तो भएको छ । पखेँटा भाँचिएको चरी जस्तो भएको छ । अब खुट्टा ठीक भएपछि फेरि नयाँ डाँडाकाडामा कुद्ने नै छु ।अब अगाडि पनि नदेखेका सपना आउलान् तिनलाई पनि पूरा गर्ने पर्छ । भोलि कसैले देखेको हुँदैन तर भोलि देखिँदैन भनेर मेहनत छाड्ने कुरा पनि भएन …. ।